GvSIG 1.9 iyo 2.0 degan July iyo September - Geofumadas
1.9 iyo 2.0 oo deggan July iyo September
Mee, 2009 GvSIG, tabo cusub
Sida rasmiga ah, qaybaha ugu muhiimsan ee baaxadda iyo taariikhaha loo sameeyay si loo sii daayo qaababka daggan ee gvSIG ayaa lagu dhawaaqay. Jawaabta laba su'aalood oo aasaasi ah waa mid aad u qiime badan:
1 Goorma ayuu GvSIG 1.9 sii deyn doonaa?
27 ee July ee 2009
2 Goormee ayuu gvSIG 2.0 soo bixi doonaa?
15 ee Sebtember 2009
Waxaan rajeyneynaa in dadaalka horumarinta uu yahay mid ujeedkiisu yahay inuu iftiinka mashruuca ka dhigo, xitaa haddii ay ku xirantahay Java sababtoo ah waxay u muuqataa in noocyadani ay noqon doonto heer wanaagsan oo tartan ah oo ka dhan ah codsiyada macaamiisha. Liiska wax soo hagaajin ayaa la daabacay, kuwaas oo aan horay u sii marnay qaar iyadoo aragtida koowaad ee xNUMX alpha. Hoosta hoose ee horay loo sii daayay iyada oo loo marayo liiska qaybinta iyo qaar ka mid ah golayaasha:
Qalabkan, qalabka noocan ah waxaa lagu daray kordhinta lagu sameeyey Wasaaradda Deegaanka ee Junta de Castilla de León ugu yaraan:
- Qalabka macluumaadka degdegga ah (marka calaamaddu u taagan tahay joomatari, a qalab ama hadalka xumbada leh macluumaadka joometeriga).
- Qalabka bandhigga iskudubarid badan (Waxay u oggolaaneysaa inay u muujiso isku-duwayaasha aragtida isla mar ahaan isku-duwaha juqraafi iyo UTM, xitaa qoryaha kale ee laga soo xulay aragtida).
- Hyperlink horumarsan, loogu talagalay in lagu badalo hyperlink hadda oo u ogolaanaya:
- Ku dar xogta juqraafiga lakabka (ku dar beeraha "Goob", "Goob", iwm. miis u leh dhowr wado).
- Soo qaado beeraha (beeraha laga soo qaado hal miis oo kale, si joogto ah).
Post Previous«Previous Tusaale ahaan qiyaasidda tayada Software Free
Post Next Qalabka juqraafiyeed ee lagu qaabeeyey Bentley MapNext »
2 Jawaab "gvSIG 1.9 iyo 2.0 degan July iyo September"
Gvjodido isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, ku dhawaad ​​Abriil, wali maaha gvSIG 2.0
Febraayo, oo aan weli wali gvSIG 2.0 ... 64 qaniinyo ... Fuck!